Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "ngenyanga", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "ngenyanga", iqabane iimvakalelo?
Ikhadi ka 3500 yen kwintsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa le "lwenyanga" isikhundla umva lwentsebenzo simahla ukufumana indlela "nyanga"
na, okanye nezengqondo zange agungqe hayi oluzinzileyo, ukuyidla iimvakalelo ezakhayo oko kuthetha ukuba kuhlale kulula ukuba angabathembi kunye nemeko. Okanye into- ngentonga imeko ngokucacileyo emnyama namhlophe, oko kunokuba elinye beqela ixhala ongenasiphelo kunye nokukhathazeka ngelixa ayeke phakathi ithemba uloyiko lokwenene, imeko ezingazinzanga engqondweni hayi ezolile iya kuxanda ngokupheleleyo engqondweni .
ikhadi "iNyanga" nguye ithande ukuba zenzeke ixesha apho iqala ukuhamba bejonge isiphelo kwizisweli ukuhamba kwixesha elizayo. Ukuze angazinyatheleli kuginywa ukuhamba, ukususa i element ezingazinzanga leyo engqondweni yakho, kubalulekile ukuba ubuyekeza ulwalathiso. Ukuba
iqela iimvakalelo "nyanga" yemeko entle ithathwa ukuba ibhekisele
"inyanga" Waphuma nge kwindawo entle, intliziyo ibonisa imeko ukuzola. Uloyiko nexhala, ungakhathazeki, okanye ukubhomboloza imvakalelo alawule ingqondo, okanye akubone nochuku, usenokuba kwakhona va 'amanwele.
yi izibuko kuye iimvakalelo ezingakhiyo, yena okanye licinezelwe nxamnye iimvakalelo zakho, kodwa wena okanye Kangu 'icala, amanyathelo ezinjalo ziya kuba Tsukihanashi kude kuye. Ngenxa yokuba urhulumente ezingazinzanga ngokwasengqondweni, ngaphandle ukuvuselela kangangoko kunokwenzeka iimvakalelo zakhe, kungcono ukuba umgama, uyakwazi ukugcina abantu ababini yobudlelwane yangoku.
kwimeko uthando ezingabuyekezekiyo, yena HIV akwenzi nabo kakubi ngawe. Ngenxa awukwazi ifanelane iimvakalelo elinye iqela apha kwanokuba uvumo kwimeko ezingazinzanga, utatomkhulu kubhetele ukuba luyeke uvumo. Okokuqala, ukususela ezolile ukuba uphefumle, susa iingcinga ezimbi izinto ophambene ezingazinzanga engqondweni, masenze waba ukugcina ubudlelwane kunye lwangoku bakhe. Kwabo
umva ukuma "inyanga" lithetha Ukuba uthandana qela
yekhalenda "inyanga" Waphuma kwindawo umva, nkqu imeko yangoku Imeko ezingazinzanga kwaye umbhodamo, oko kuthetha ukuba isiphelo kuyeza.
ukuze soyise imeko enzima, ngoko nilindele elizayo eyakhayo eliqaqambileyo, kunokwenzeka ukuba kunokwenzeka ukuba baphumelele ezandleni. Mhlawumbi kukho ithuba ukuba wayevakalelwa xenga lithule kude kube ngoko. Okanye ndafumanisa iimvakalelo zakhe ukuba uthando ezingabuyekezekiyo, ezifana amazwi nezenzo zakhe mna ukutyhala umva wam, kusenokuba eqhotyoshelwe ukuthena iimvakalelo zam.
eli khadi, kodwa iimvakalelo zakhe ngokuyimfuneko akuthethi oko kumlungele na kuwe, ngokuba thina ngamazwi kunye nezenzo zakhe kukwenza ithuba susa iimvakalelo zakho.